Rastrabani.com | अब्बासी ओलीका पहिलो पाहुना ! - Rastrabani.com अब्बासी ओलीका पहिलो पाहुना ! - Rastrabani.com
अब्बासी ओलीका पहिलो पाहुना !
अब्बासीको भ्रमणलाई एकथरी भने बधाई र सार्कभन्दा चीन सम्बन्धसँग जोडेर हेर्दैछन् । चीन पाकिस्तानको निकै विश्वासिलो छिमेकीका साथै व्यावसायिक साझेदार मानिन्छ । भारतसँग सम्बन्ध खराब रहे पनि सार्कको पर्यवेक्षक मुलुक चीनसँग पाकिस्तानको निकै राम्रो सम्बन्ध छ । नेपालमा हालै बनेको वाम गठबन्धन सरकारलाई चीन निकट भन्ने गरिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिफोन गरेर ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्ता गरेका थिए । त्यही संवादमा ओलीले मोदीलाई जनकपुर र मुक्तिनाथको समेत भ्रमण गर्ने गरी आउन निम्तो दिएका थिए । त्यसपछि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले काठमाडौं भ्रमण गरेकी थिइन् । ओली–मोदी भ्रमण आदानप्रदानको चर्चा चलिरहेकै बेला उनीभन्दा अघि अब्बासी आउन लागेका हुन् । नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र भए पनि यहाँको कर्मचारीतन्त्रले सार्कलाई उपेक्षा गरेको भन्दै राजनीतिक तवरबाटै संवाद थाल्न अब्बासी आउन लागेको एकथरी विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।
अब्बासीको भ्रमणलाई आकस्मिक भनिए पनि त्यसको तयारी केहीअघिदेखि नै भएको एक परराष्ट्र अधिकारीले बताए । पाकिस्तानले यस्तो भ्रमण चाहिरहेको भए पनि नेपालले त्यसको चाँजो मिलाएको थिएन । पाकिस्तानस्थित नेपाली राजदूत सेवा लम्साल अधिकारीले यो भ्रमणबारे जानकारी दिन चाहिनन् । परराष्ट्र सचिव र दोस्रो वरीयताका सहसचिव जेनेभा भ्रमणमा छन् ।
परराष्ट्रमा तेस्रो वरीयतामा रहेका कृष्णप्रसाद ढकालले पनि भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी दिन सकेनन् । ‘भ्रमण हुने सुनेको छु । शिष्टाचार महापालले काम गरिरहनुभएको होला,’ उनले भने । महापालले पनि भ्रमणको तयारी रहेको तर सबै जानकारी आफूलाई नभएको बताए ।
भ्रमणका क्रममा अब्बासीले सार्कका अलावा नेपाल–पाकिस्तान सिधा हवाई उडान, दुईपक्षीय व्यापार, जनस्तरको सम्बन्ध तथा गत चैत २५ मा नेपालबाट हराएका आफ्ना अवकाशप्राप्त कर्णेल मोहम्मद हबिब जाहिरको खोजीबारे कुराकानी गर्ने परराष्ट्र अधिकारीले जनाए । जाहिरलाई भारतीय खुफिया एजेन्सीले अपहरण गरेको हुन सक्ने पाकिस्तानको रक्षा मन्त्रालयले टिवटबाटै आशंका व्यक्त गरेको थियो ।
‘गार्ड अफ अनर’ विमानस्थलमा नहुने
अब्बासीको भ्रमण औपचारिक हुने हुनाले उनलाई ‘गार्ड अफ अनर’ र रात्रिभोज दिने तयारी छ । त्रिभुवन विमानस्थलमै ‘गार्ड अफ अनर’ दिने पुरानो प्रचलन भने परिवर्तन गरेर नयाँ थालनी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘गार्ड अफ अनर’ दिने स्थान नै त्रिभुवन विमानस्थलको अति विशिष्ट क्षेत्रमा राखिएकाले पाहुनाको स्वागत गर्न ठूला नेता गएजस्तो देखिने भएकाले यसलाई परिवर्तन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले कान्तिपुरलाई बताए । ‘हामीले प्रोटोकललाई ध्यान दिनेछौं,’ रिमालले भने । साभार: कान्तिपुर डेलीबाट